Pin gbọmgbọm Nzuzo ndepụta Rubber Extruder Machine - China Qingdao Otu ebe Machinery
Pin gbọmgbọm Nzuzo ndepụta Rubber Extruder Machine
PIN-gbọmgbọm oyi na-eri nri roba EXTRUDER 1 Dị Iche Iche extrusion isi na-etinyere extrude iche iche ọkara okokụre roba products.Available na Kwụ Ọtọ isi, zọcha isi, Cross isi, warara extrusion isi na strainer isi. 2 The gbọmgbọm na-emi esịnede ọtụtụ zones. Na nri zong, na gburugburu ohere mpere-arụ ọrụ na akụkụ-apụta aka udia ike. Na plastication na extrusion zones, dị iche iche na nọmba nke atụdo bụ fitted.The gbọmgbọm bụ nke sọrọ metal Ọdịdị, ghụpụ circumferenti ...
Port: Qingdao, CNF, CIF nwekwara nabatara
PIN-gbọmgbọm oyi na-eri nri roba EXTRUDER
1 Dị Iche Iche extrusion isi na-etinyere extrude iche iche ọkara okokụre roba products.Available na Kwụ Ọtọ isi, zọcha isi, Cross isi, warara extrusion isi na strainer isi.
2 The gbọmgbọm na-emi esịnede ọtụtụ zones. Na nri zong, na gburugburu ohere mpere-arụ ọrụ na akụkụ-apụta aka udia ike. Na plastication na extrusion zones, dị iche iche na nọmba nke atụdo bụ fitted.The gbọmgbọm bụ nke sọrọ metal Ọdịdị, ghụpụ circumferentially.
3 The ịghasa ihe adopts 38CrMOALA alloy ígwè, mgbe quenching na tempering, n'ịkpụzi, qualitative, nkenke egweri, n'elu nitriding ịgba bimetal, polishing, wdg, na atụmatụ nke elu kpọmkwem, elu corrosion mgbochi, elu wear eguzogide ọgwụ. The ịghasa ọrụ ndụ bụ okpukpu abụọ ruo ogologo oge.
The ihe onwunwe bụ: 38CrMOALA
Iwe Iwe Ọkụ Degree : HB240 Celsius ~ 280 Celsius
Nitriding ekweghị ekwe : HV850 Celsius ~ 1000 Celsius
N'elu Roughness : Ra0.4
Ịghasa Straightness : 0.015mm
Ike Chrome plating mgbe Nitriding : ≥900HV
Chrome ọkpụrụkpụ : 0,05 ~ 0.10mm
Two-adọ alloys : HRC56 Celsius ~ 65 Celsius ( nickel-isi alloy )
4 The Kwadobe na reducer na-mere nke alloy ígwè, ezé bụ nnọọ ike.
Gearbox na oghere mmepụta aro maka ịghasa obi jụrụ ezie Rotary Joint.
5 Heating na obi jụrụ usoro: anwụ okpomọkụ (ebu okpomọkụ controler).
6 Ịnọgide Speed ma ọ bụ agbanwe ọsọ mbanye dị ka kwa kpọmkwem chọrọ.
Motor: ugboro njikwa ọsọ moto ma ọ bụ DC moto.
7 The uru nke igwe na-agụnye mma plastication N'ihi ya, elu extrusion ike, ala na okpomọkụ nke oku roba na-eji ire ụtọ na-arụ ọrụ, mfe ime ihe na mmezi.
8 Ọ bụ ọtụtụ ebe ada na extruding roba sooks, roba akpa, roba mpempe akwụkwọ, n'ime liner, akàrà, waya USB, n'ọbọ, taya zọcha, taya n'akụkụ mgbidi, nwekwara ike-eji na-enye roba maka obere size calender.
Nka na ụzụ kwa nke isi ụdị:
ịghasa DIA mm 90 120 150 200 250
L / D ruru 12-14 12-14 16 12-18 12-18
Max.Screw ọsọ r / min 60 55 45 33 26
Ahịrị qty nke pin 8 10 10 12 12
Pin qty nke n'ahịrị nke ọ bụla 6 6 8 10 12
Ịnye ọkụ 380V / 50HZ 380V / 50HZ 380V / 50HZ 380V / 50HZ 380V / 50HZ
Mpaghara nke mmiri ọkụ mgbasa 4 4 4 4 4
mgbasa kpo oku
ike N'arọ / h 250-360 600-900 1000-1500 1600-2600 ~ 3000
n'ozuzu akụkụ L mm 2570 3010 4000 7250 7980
About ibu t ~ 4.5 ~ 6 ~ 7,25 ~ 12 ~ 17
Ọ bụrụ na ị nwere gị pụrụ iche chọrọ, biko chere free ịkpọtụrụ anyị. Anyị na-hazie igwe dị ka kwa gị mkpa pụrụ iche.
Previous: C Type Rubber n'ịgwọ Press Machine
Osote: Hot ndepụta Rubber Extruding Machine
oyi roba extruder
Rubber Myọcha strainer Extruder Machine
BMC unsaturated Glass Fiber resin Ọgwụ Mol ...
Ịkwanyere Steel Waya mesikwuru sooks Extruding Line
Obere Hydraulic Rubber Vulcanizer Machine